လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို လက်ခံကျေနပ်ခြင်းမရှိဟု မြန်မာအစိုးရတုန့်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အိုးအိမ်များ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည့် ထောင်ပေါင်းများသော မူစလင်များကို အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုရန် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ တိုက်တွန်းချက်ကို မြန်မာအစိုးရက ပယ်ချလိုက်သည်။
Episode 4: အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအန္တရာယ်
ဒီတပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရမှု အန္တရာယ်အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
အာဆီယံ ရင်ဆိုင်ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ
ပထမနှစ် ၅၀ အတွင်း ရရှိခဲ့သော အာဆီယံအဖွဲ့၏ အောင်မြင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရာတွင် အဖွဲ့ကို မည်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကြောင်း အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း တစ်ဦးက သူ့ပုဂ္ဂလအမြင်ကို ပြောပြသည်။
Surin Pitsuwan ရေးသားသည်။
လူသိမများသေးတဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တစ်ခုရဲ့ သောက
မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက လေကြောင်းလိုင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖက်စပ်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ထူထောင်မယ့် အစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ ဂျပန် ANA လေကြောင်းလိုင်းက ပြောကြားပါတယ်။ ပြည်တွင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရွှေသံလွင်လုပ်ငန်းစုက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Golden Sky World နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ Asian.
4G ကွန်ရက်ကို သုံးဆပိုမိုမြန်ဆန်လာစေရန် အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဟု အူရီဒူးက ကြေညာ
လက်ရှိ 4G ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုပြီး မိုဘိုင်းမှတဆင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့်အခါ ရရှိသော အင်တာနက်အမြန်နှုန်းထက် ၃ ဆ ပိုမို မြန်ဆန်စေရန် အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဟု အူရီဒူးမြန်မာက ယနေ့ ကြေညာလိုက်သည်။ နည်းပညာအဆင့်မြင့်ထားသော ကွန်ရက်သည် 4×4 MIMO နည်းပညာကို 256 QAM နည်းပညာနှင့်.
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် အမေရိကန်အမတ်တွေ အဆိုပြု
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဆွေးနွေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လာရောက်မယ်လို့ ကြေညာထားချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေ ချမှတ်ဖို့ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေက အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။